venus1688 - အြန္လိုင္းဂိမ္း၊ LIVE ကာစီနို၊ ေဘာလံုးနွင့္ အားကစားမ်ိဳးစံု ၀န္ေဆာင္မွဳ
အြန္လိုင္းဂိမ္း၊ LIVE ကာစီနို၊ ေဘာလံုးနွင့္ အားကစားမ်ိဳးစံု ၀န္ေဆာင္မွဳ
Contact UsCall 09 770 788268Get directionsWhatsApp 09 770 788268Message 09 770 788268Get QuoteFind TableMake AppointmentPlace OrderView Menu
ဘားခရက် ကာစီနိုဖဲဂိမ်း ( ၂ )
အကယ်၍ ပထမဆုံးဝေတဲ့ ဖဲ2ချပ် ပေါင်းခြင်း 8 သို့9ဖြစ်ပါက natural win လို့ သတ်မှတ်ပြီး ရရှိတဲ့ ဘက်က အနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ 8 ကို9ရရှိခြင်းက နိုင်ပါတယ်။ natural win မဖြစ်ခဲ့ပါက ဖဲချပ်များကို လိုအပ်သလို ဆွဲ ယူနိုင်ပါတယ်။
ကဒ်များ ထပ်မံ ဆွဲခြင်းကို ဝိုင်းကိုင်သူ များက စည်းက...
ဘားခရက် ကာစီနိုဖဲဂိမ်း ( ၁ )
ဘားခရက် လောင်းကစားနည်းဟာ ရိုးရှင်းပြီး စိတ်လှုပ်ရှား စရာ အလွန်ကောင်းသော လောင်းကစားနည်း တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ဖဲချပ်ကို ကိုင်စရာမလိုပဲ လောင်းကစားလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားပွဲတစ်ခုတွင် ကစားသမား ( player ) ၊ ဒိုင် ( banker ) ဆိုပြီး နှစ်ဖက်ပါ ဝင်ပါတယ်။ သင့် အနေနှင့...
အွန်လိုင်း ကာစီနိုများ လူအများကြား ရေပန်းစား လာသည်နှင့် အမျှ အွန်လိုင်း ကာစီနို ဝဘ်ဆိုဒ်များလည်း အပြိုင်အဆိုင် ပေါ်ပေါက်လာ ကြပြီ ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော အွန်လိုင်း ကာစီနို များစွာ ထဲမှ ကစားရ အဆင်ပြေပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှု များကို ပေးစွမ်းနိုင်သော အွန်းလိုင်း ကာစီနို တစ်ခုကို...
မြန်မာ့ ထိပ်တန်း လောင်းကစားဂိမ်း ( အွန်လိုင်း ကာစီနို )
ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာများ တိုးတက်လာသည့် ယနေ့ခေတ်တွင် လူကြိုက်များလှသော၊ စိတ်‌ပျော်ရွင်မှု ပေးနိုင်သော ကာစီနိုများသည်လည်း အဆင့်မြှင့်ကာ အွန်လိုင်းမှတဆင့် ကစားနိုင်ရန် ဖန်တီး နိုင်ခဲ့ကြပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အွန်လိုင်း ကာစီနိုများ ပေါ်ပေါက် လာခြင်းကြောင့်...
Taung Paw Thar Shan Koe Mee Game
In Shan Koe Mee, there isaspecial case that getting the three same cards of Jack, King, Queen is not Bu, you can even win three cards Koe Mee. But if you got two same cards of Jack, King, Queen, it will be Bu. For three identical cards, there is only to compare ...
Myanmar card game, shan koe mee
And the dealer can capture the players with drawing the card. If he wants to draw the cards he can draw and continue capturing the player, like Twenty-one. But you can't draw up to five cards like Twenty-one. You can only draw one more card whether you lose or win....
How to play Shan Koe Mee, Boo gyi and other card games
Let's takealook together what are the most popular card games and online gambling games in Myanmar? There are many ways to play cards. Koe Mee, Bu Gyi, Twenty-one, Shan Koe Mee, Poker and Shoe are the most popular cards games. Shan Ko Mee a...
2. Online Betting on Cockfights
Bets are made by looking at the color of the rooster leg. If you want to makeabet, just shout and tell. No matter how loud the encouragement, it will not affect the fighting cocks. The only thing for the audience to do is wait for the result of the battle and sho...
1.Online Betting on Cockfights
Cockfighting is very popular among people who are fond of betting and making cockfight. The roosters which are going to fight in match receive the present, kind and care from their owners.
If you breed good fighting cocks, your income will be so high that you can m...
(Translated by Google) Play site (Original) ေဆာ့ေနၾက ေ၀့ဆိုဒ္ ပါ
- Venus1688 c
trustable and the best online game service
- nang s
09 770 788268